खुट्टाबाट जुत्ताको गन्ध आउँछ ? यसरी हटाउनुस गन्ध... — KhabarTweet
खुट्टाबाट जुत्ताको गन्ध आउँछ ? यसरी हटाउनुस गन्ध…
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०९, २०७४ समय: ८:०६:३४
गर्मी सुरु भएसंगै पसिनाबाट उत्पन्न हुने समस्या बढ्छ । यसको लागी कतिपयले विभिन्न बडी स्प्रे तथा पर्फ्युको प्रयोग गर्दछन् भने कतिले नियमित नुहाउनु, पानी पिउने अनि सन्तुलिन भोजनमा ध्यान दिने गर्दछन् ।
३. फिटकिरी यसमा एन्टि सेफ्टिक गुण हुन्छ । जसले व्याक्टेरियालाई रोकी खुट्टाको गन्ध हटाउछ । एक चम्चा फिटकिरी पाउडरलाई एक जग पानीमा मिसाएर खुट्टा धुनाले एकैछिनमा गन्ध हट्छ ।